मान्छे मरेपछी मलामी जादा किन शंख फुक्छन ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण - IAUA
ज्योतिश शास्त्र बैज्ञानीक तथ्य
मान्छे मरेपछी मलामी जादा किन शंख फुक्छन ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
ramkrishna October 13, 2017	मान्छे मरेपछी मलामी जादा किन शंख फुक्छन ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
मलामी जाँदा “एकोहोरो” शङ्ख किन बजाइन्छ? शङ्ख ध्वनि वातावरण शुध्दताको लागी प्रयोग गरिन्छ…यस्को ध्वनिले वातावरणमा भएका किटाणुहरुको विनाश गर्नुको साथै यस्को ध्वनिले वातावरणमा अत्याधिक मात्रामा साकारात्मक उर्जा प्रवाहित गर्छ
शङ्ख बजाउनाले मुटु,श्वास-प्रश्वास,पेट सम्बन्धि रोग हरु लाग्दैन…घरको वास्तु दोष ठीक गर्छ…र ज्योतीषिय विज्ञानको अाधारमा भन्ने हो भने शङ्ख बजाउनाले गुरु ग्रह बलियो हुन्छ… जब अात्माले शरीर छाड्छ….शरीरमा भएका किटाणु वातावरण मा नफैलियोस र वातावरणमा भएका किटाणुहरुबाट मृत-शरीरमा अाक्रमण हुन नदिनको लागी शङ्ख बजाइन्छ…
अझ शङ्खको एकोहोरो ध्वनिले धेरै मात्रामा काम(प्रभाव) गर्ने भएकोले एकोहोरो शङ्ख बजाइन्छ… (**एकोहोरो शङ्ख बजायो भने अलच्छिन लाग्छ भन्ने धारणा गलत हो)… अब सबैले ढुक्कले सधै बिहान/बेलुका घरमा शङ्ख बजाअौँ..…नारायण..।
Previous Previous post: के तपाई धेरै रुनुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदा
Next Next post: मुटु रोगीले नियमीत खाऔँ बदाम ,बदामका १० फाईदा